Enwere m otu enyi m nke na -echepụta ma na -ese ihe n'ahụ ụlọ ma na -arụ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụ ezie na nka a bụ nnukwu ego nwere ike ịgbanwe ebe ọrụ ma ọ bụ ebe a na -ere ahịa, ikike ịchepụta na eserese eserese nke ọma na oghere kwụ ọtọ bụ nke a hapụrụ ka ọ kwụsị nrụnye ma ọ bụ ntụgharị nke onye na -ese ihe. Teknụzụ obibi akwụkwọ ọhụrụ apụtala nke ga -agbanwe nke a, n'agbanyeghị… vetikal mgbidi na-ebi akwụkwọ.
Teknụzụ mbipụta kwụ ọtọ nke Wall Printer na -enye ohere ka eserese elektrọnik nke faịlụ eserese dijitalụ buru ibu nke foto, ihe osise, eserese, ma ọ bụ akara ederede n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ime ma ọ bụ mputa ọ bụla. Ezubere igwe ha ka ọ bipụta n'ọtụtụ ebe gụnyere plasta, mpempe akwụkwọ, iko, nchara, brik, ihe, vinyl, na osisi.